Villa Somalia - HADAL JEEDINTA MADAXWEYNAHA JFS MUDANE MAXAMED CABDULLAAHI FARMAAJO EE SHIRKA DHAQAALAHA BADDA, NAIROBI
HADAL JEEDINTA MADAXWEYNAHA JFS MUDANE MAXAMED CABDULLAAHI FARMAAJO EE SHIRKA DHAQAALAHA BADDA, NAIROBI
Marka hore, aan Madaxweyne Uhuru Kenyatta ku bogaadiyo qabanqaabada shirkan muhiimka ah ee ujeedkiisu yahay soo bandhigidda fursadaha tirada badan ee dhaqaalaha badda iyada oo haddana la dhawrayo biyaheenna si ay uga faa'idaystaan jiilasha soo socda mustaqbalka.
Soomaaliya waxaa suuragal u ah inay inta ugu badan ka faa'iddo dhaqaalaha badda ah si xooggan oo isla markaana waara.
Maamulkaygu waxa uu garawsan yahay in khayraadkan baaxadda weyn ee aan weli la adeegsan ay wax badan ka beddelayaaan dhibaatooyinka saboolnimada, cunto la'aanta, biyo yaraanta, baahiyaha tamarta iyo caqabadaha shaqala'aanta.
Sidaasi darteed, waxaannu dejinaynaa istaraatijiyad ballaaran si aan uga faa'idaysanno dhaqaalaha badda ku salaysan, annaga oo dhawrayna deegaanka.
Muddadii dheerayd ee aan khilaafka ku jirnay ayaa shaki la'aan si taban u saamaysay koboca iyo horumarka khayraadka badda ee Soomaaliya.
Waxaan aaminsannahay in haddii la helo daahfurnaan iyo iskaashi sarreeya, lagana faa'idaysto horumarka dhanka teknaloojiyadda iyo awoodaha satalaytka, aynu awood u yeelan doonno hakinta dhaqdhaqaaqyadan.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan fursaddan uga faa'idaysanayaa inaan xuso in Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashiyada iyo maalgashiyada la xiriira khayraadka baddeenna hodonka ah.